Faits-Divers – Page 1100 – Midi Madagasikara
Distrikan’i Mampikony : Ben’ny tanàna voarohirohy amin’ny vono olona
Ny alahady lasa teo no napetraka ny fitoriana azy. Raha araka ny fantatra dia notorian’ny fianakavian’ny maty izy ho niray petsapetsa tamin’ny ratra sy vono izay niteraka ny fahafatesan’ny lehilahy iray ity Ben’ny tanàna ity. Ny 03 martsa teo dia nisy niditra an-keriny tao amin’ilay tokantrano. Nodarohan’ireo ilay lehilahy. Ny mamany kosa mba nahavita niafina…
Tovovavy may : Tsy nahomby ny ody may, maty tao amin’ny hopitaly
Efa torovana ary efa maty ny taovany sasany noho ny fidiran’ny aretina vao nentina teny anivon’ny toeram-pitsaboana. Tovovavy 16 taona main’ny solitany ary tena voa mafy tokoa satria hatrany amin’ny tendany no midina no indray simban’ny afo. Nentina teny amin’ny mpanao ody may, toa ny fanaon’ny olona any ambanivohitra ihany, izy. Rehefa hita fa tsy…
Ambatolampy : Asan-jiolahy, tovolahy voatifitra, lasa ny vola 2, 3 tapitrisa ariary
Tao amin’ny tanàna antsoina hoe Antanimasaka any Ambatolampy no nanafihan’ireto jiolahy mirongo fiadiana trano maromaro tamin’ny fiandohan’ny herinandro. Nanao be fiavy ireo olon-dratsy ary dia nihorohoro ny iray tanana. Voalaza fa tsy nisy nisaron-tava izy ireo. Voamariky ny mponina fa nitondra basy AKM roa , basim-borona iray ary PA iray ireo mpandroba ireo. Ny vaovao…
Ambohimalaza : Fasana roa nisy namaky, razana maro tsy hita
Fasana roa indray no fantatra fa vaky teny amin’ny faritra Ambohimalaza. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa ny iray eny atsimon’ny tanana ary ny faharoa eny Masombahiny. Ilay voalohany, tamin’ny alatsinainy teo no nahafantaran’ny tompony azy fa visy namaky. Tamin’io fotoana io, nisy fandevenana saika hatao. Rehefa nojerena, nikorontana ny tao anaty fasana tao ary fantatra…
Ejeda : Faty feno diana antsy sy nodoroina
Lehilahy iray 24 taona no hita faty ny alahady lasa teo tao amin’ny fokontany Ambatovaky any Ejeda. Nahazo antso ny Kaomandin’ny Borigady tany an-toerana ka nidina nijery ny zava-nisy. Niaraka taminy tamin’izany moa ny ben’ny tanàna tao an-toerana ary ny dokotera hizaha ny razana. Marihina fa faty rakotra dian’antsy sy nodoroina no novantanin’izy ireo tamin’izany…
Ambatondrazaka : Zazavavy 9 taona nampijerena sary vetaveta dia naolana
« Notambatambaziny aho dia nasainy niditra tao an-trano, nasainy nijery film izay tiako aho fa tsy nahita ka izy no nandefa horonan-tsary vetaveta, ka nasainy niakatra teo ambony farafara ka notampenany ny vavako ka nataony teo aho ». Io no nambaran’ity zazavavy kely vao 9 taona monja ity raha nanontaniana. “Nambarany fa hovonoina aho raha miteniteny amin’ny…
← Previous 1 … 1 099 1 100 1 101 … 1 186 Next →